Madheshvani : The voice of Madhesh - जनतालाई विकासको अनुभूति भएको छ : दीपनारायण प्रसाद रौनियार
जनतालाई विकासको अनुभूति भएको छ : दीपनारायण प्रसाद रौनियार
मेयर, पोखरिया नगरपालिका, पर्सा
० तपार्इँ मेयरको रूपमा निर्वाचित भइसकेपछि कस्तो चुनौतीहरूको सामना गरिरहनुभएको छ ?
— म मेयरको रूपमा निर्वाचित भइसकेपछि नगरपालिका चलाउन धेरै किसिमका चुनौतीहरूको सामना गरिरहनु परेको छ । किनभने स्थानीय निकाय २० वर्षदेखि जनप्रतिनिधिविहीन थियो । अहिले जनप्रतिनिधि आउँदा विकास लगायतका काममा सुधार गर्न चुनौती त अवश्य नै हुन्छ । सरकारी ऐनअनुसार टेकेर जाँदा अप्ठ्याराहरू छन् । पर्सा जिल्लाको दोस्रो सदरमुकामको रूपमा पोखरिया नगरपालिका रहेको छ । पहिलादेखि नै यहाँ रहेका बेथितिहरूलाई हामी विस्तारै सुधार गर्दै लगिरहेका छौं ।
० तपार्इँ युवा हुनुहुन्छ, राजनीतिमा पनि नयाँ हुनुहुन्छ । यी चुनौतीहरूलाई कसरी व्यवस्थापन गर्नुहुन्छ ?
— चुनौतीहरूलाई मैले एउटा अवसरको रूपमा पनि लिएको छु । नगरपालिकाको विकासका लागि सबैसँग समन्वय, सहकार्य र छलफल गर्दै काम गरिरहेको छु ।
० तपार्इँ मेयरको रूपमा निर्वाचित भएको एक वर्ष पूरा भएको छ । यो एकवर्षे अवधिलाई कसरी मूल्यांकन गर्नुहुन्छ ?
— अहिलेसम्म हामीले गरेका कामहरूको मूल्यांकन गर्दा ठिकठिकै लागेको छ । राजनीतिक रूपमा अनुभव कम होला । तर, जनताको अपेक्षाअनुसार मैले काम गर्दै आइरहेको छु । मैले सबैसँग सहकार्य र छलफलको आधारमा नगरको विकासका योजनाहरू ल्याउँदैछौं ।
० निर्वाचनका बेला तपाईँहरूले गर्नुभएको प्रतिबद्धता कति पूरा भयो त ?
— मैले निर्वाचनका बेला जुन प्रतिबद्धता गरेको थिएँ, सोहीअनुसार कार्यक्रमहरू अगाडि बढाइहेको छु । मैले भनेको थिएँ, प्राविधिक शिक्षामा जोड दिन्छु । सोही प्रतिबद्धताअनुसार पोखरियाको ११ कक्षादेखि प्राविधिक शिक्षा सुरू भइसकेको छ । त्यस्तै, मैले सडक र नालाको क्षेत्रमा सुधार गर्छौं भनेको थिएँ, त्यसैअनुसार एउटा मापदण्ड बनाएर सडक र नालाको काम भइरहेको छ । सडक ढलान र कालोपत्रे बनाउनका लागि पनि प्रक्रिया अगाडि बढाएका छौं । यस्तै, दलित समुदाय तथा ज्येष्ठ नागरिकलाई निःशुल्क औषधोपचारका लागि व्यवस्था मिलाएका छौं ।
० नगरपालिकाको कामले जनता सन्तुष्ट छन् ?
— नगरपालिकाले जसरी काम गरिरहेको छ, त्यसबाट जनता पूर्णरूपमा सन्तुष्ट छन् । तर, विपक्षीहरूले असन्तुष्टि जनाइरहेका छन् । हामीले जनताको अपेक्षा र चाहनाअनुसार नै काम गरिरहेका छौं । त्यसैले जनता हाम्रो कामबाट खुशी छन् ।
० सिंहदरबार गाउँ–गाउँमा भनिन्थ्यो, पोखरिया नगरपालिकाका जनताले यो महसुस गर्न पाएका छन् ?
— सिंहदरबार गाउँ गाउँमा भन्ने नाराभन्दा कामहरूबाट जनताले महसुस गरेका छन् । तर, जुन किसिमले हामी जनतालाई सुख सुविधा दिनुपर्ने हो, त्यो दिन सकिरहेका छैनौं । सरकारले हामीलाई दिनुपर्ने अधिकार किन अहिलेसम्म दिएको छैन । सरकारबाट हामीले पाउनुपर्ने व्यवस्था पाएका छैनौं । किनभने नगरपालिकालाई आफ्ै बस्ने ठाउँ छैन । सिंहदरबारका केही अधिकारहरू मात्र गाउँमा आएका छन् । सिंहदरबार गाउँ गाउँमा भनेको त जनताले सबै काम आफ्नै नगरभित्र गर्न पाउनु पर्छ । तर, त्यस्तो छैन । आंशिक रूपमा केही अधिकारहरू मात्र हामीले पाएका छौं । सोही अनुसार जनताको सेवा गरिरहेका छौं । यो नारालाई पूर्णरूपमा जनतालाई महसुस गराउन पहल गरिरहेका छौं । त्यसका लागि सम्बन्धित निकायसँग पहल गरिरहेका छौं ।
० अहिले जसरी करको विषयमा विवाद आएको छ, पोखरिया नगरपालिकामा करको दायर के छ ?
— हामीले कुनै नयाँ कर थप गरेका छैनौं । विगतमा जे विषयमा कर लिने गरिएको थियो, सोही मापदण्डअनुसार कर उठाइरहेका छौं । केही केही विषयवस्तुमा सामान्य किसिमले वृद्धि मात्रै गरेका छौं । जनतालाई थप आर्थिक र भार थप्ने किसिमको कुनै पनि कर लिएका छैनौं । बाहिर जसरी हल्ला भइरहेको छ कि कर बढ्यो, त्यस्तो अवस्था हाम्रो नगरपालिकाभित्र छैन । हामीले नागरिकता, जन्मदर्ता, मृत्यु दर्ता जस्ता विषयमा एउटा मापदण्ड बनाएर निःशुल्क बनाएका छौं । ३५ दिनभित्र यस्ता विषयमा सिफारिस निःशुल्क गरिएको छ ।
० प्रदेश सरकारसँग कसरी समन्वय गर्दै हुनुहुन्छ ?
— अहिलेसम्म प्रदेश सरकारले हामीलाई कुनै किसिमको सहयोग गरेको छैन । तर, हामीले समन्वय गर्दै आएका छौं । हामीले आफ्ना नीति कार्यक्रमहरूबारे प्रदेश सरकारका मन्त्री तथा मुख्यमन्त्रीसँग छलफल गरिरहेका छौं । प्रदेश सरकारबाट सहयोग पाउने प्रतिबद्धता पाएका छौं ।
० तपार्इँले दिग्गज तथा पुराना राजनीतिज्ञहरूलाई पराजित गर्दै मेयरमा निर्वाचित हुँदा कस्तो अनुभव लागेको छ ?
— यहाँका जनताले विगतमा विकासको नाममा भाषण र नारा मात्र सुनेका थिए । तर, विकासको अनुभूति गर्न पाएका थिएनन् । विकासको प्रतिबद्धता दिने तर चुनाव जितेर गइसकेपछि जनतालाई मुख देखाउन पनि नआउने परिपाटी थियो पहिला । त्यसैले जनताले यसपटक कुनै युवालाई अवसर दिऔं भनेर मलाई निर्वाचित गराएको हुन् । म निर्वाचनमा विजयी भएपछि एकदमै हर्षित त भएँ नै तर, एउटा ठूलो जिम्मेवारी थपिएको महसुस पनि गरेको छु । । मैले जनतालाई जे प्रतिबद्धताहरू दिएको थिएँ सोहीअनुसार काम गरिरहेको छु र जनता सन्तुष्ट पनि छन् । मसँग राजनीतिक अनुभव कम होला तर जनताले दिनहुँ भोगिरहेको समस्या, जनअपेक्षाबाट अनभिज्ञ छैन । तसर्थ, म आफ्नो प्रतिबद्धताअनुसार काम गरिरहेको छु । मैले यसलाई चुनौती र अवसरको रूपमा लिएको छु । विगतमा विकासको नाममा आएका बजेट जसरी सदुपयोग हुनुपर्ने थियो त्यसरी भइरहेको अवस्था थिएन । अहिले हामीले जनतालाई विकासको अनुभूति गराएका छौं । वास्तवमा जनता करदाता र मतदाता होइनन् भन्ने कुरा बुझेका छन् ।
० पोखरियालाई समृद्ध नगरपालिका बनाउन प्रतिपक्षीहरूसँग कस्तो अपेक्षा छ ?
— मैले कसैलाई प्रतिपक्षीको रूपमा मात्र नभई सँगै काम गर्ने सहयात्रीको रूपमा लिएको छु । उहाँहरूसँग मैले बेला बेलामा नगरपालिकाको विकासका बारेमा छलफल र सहकार्य गर्दै आएको छु । कुनै नीति वा कार्यक्रम गर्दा सर्वदलीय बैठक बोलाएर सबैसँग छलफल गरी योजना बनाउने गरेको छु । हामीले गरिरहेको कामलाई निगरानी र सहयोग गर्नुस् भनेर भन्दै आएका छौं । यदि हाम्रो काममा कुनै किसिमको त्रुटी भइरहेको छ भने हामीलाई सचेत गराउनुस् भनेका छौं । हामीले गरिरहेका राम्रो काममा कुनै किसिमको विवाद खडा नगर्नुस्, विकासको काममा अवरोध नपु¥याउनुस् भनेर आह्वान पनि गर्न चाहन्छु ।